Go Go .. … ဘွားဒေါ် Gold | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » Go Go .. … ဘွားဒေါ် Gold
Go Go .. … ဘွားဒေါ် Gold
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Nov 30, 2015 in Opinions & Discussion | 22 comments
တနေ့ဂ ဘွားဒေါ် သူ့ပါတီ အနိုင်ရ အမတ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ပြောတဲ့ မိန့်ခွန်း လူထုအကြား အတော်လေး လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားတယ်ဗျ။ မှတ်မှတ်သားသား ဖြစ်မိတာတွေကတော့ ရွေးကောက်ပွဲလွန် လူထုစည်းရုံးရေးကမ်ပိန်း အမှိုက်ကောက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုပြုမယ်။ လစာထဲက ၂၅% လျှာခိုင်နှုန်းဆိုလား ဖြတ်မယ်။ စည်းကမ်းဗိုင်းကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုင်တွယ်မယ်။ သူ့ပါတီ သူ့မဲမို့ သူကြိုက်တာ လှုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ နဂိုထဲက ဘွားဒေါ်အကြောင်းလည်း သိနေတာပဲဟာ။ အပြင်လူနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါ ပျော့ပြောင်းညှင်သာတယ်၊ ကိုယ့်လူကြတော့ မျက်နှာသာမပေး ခက်ထန်တယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ သူ့ကို မုန်းသွားသူ ဒီချုပ်ပါတီဝံ မနည်းမနော ရှိမဟုတ်လား။ ဘာညှာဆိုတာ ပြောဖို့ စောလွန်းပေမှဲ့ ပြောထားတာကို ဝေဖန်သမှု ပြုရလျင်..
အနိုင်ရ ဒီချုပ်အမတ်တွေ အိပ်ငိုက်မနေဖို့ မဲဆန္ဒရှင်လူထု သွေးမအေးဖို့ အရပ်ထဲဆင်း ပြည်သူ့အကျိုးပြုတာ မင်္ဂလာတပါးပါ။ အထူးအဆန်းတော့ မဟုတ်၊ ၁၉၈၈ခုနှစ်မှာ အာဏာသိမ်း စစ်အစိုးရတက်ခါစ စနေနေ့တိုင်းသန့်ရှင်းရေး လုပ်အားပေးဆိုပီး လုပ်ခဲ့တယ်၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဦးနေဝင်း တော်လှန်ရေးကောင်စီ လက်ထက်မှာလဲ ဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့တယ်။ လုပ်ခါစတော့ အဟုတ်ဗျို့၊ အိမ်နောက်ဖေးလမ်းကြားတွေများသန့်လို့.. ညနေဖက် မိသားစု ထိုင်စကားပြော၊ ခလေးတွေ ဆော့ကစားလို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ လပိုင်းလဲကြာရော ဒုံရင်းကဒုံရင်း။ ပြောရလျင် စေတနာမှ မပါ၊ စေတနာ မမှန်ဘူးလေ။ ရပ်ကွက်ထဲ ဗုံးရှာဖို့လောက် ရည်ရွယ်တာဆိုတော့ ဘယ်တာရှည်မလဲ။ ရပ်ရွာလူထုကလည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်သူတွေကို မျက်မုန်းကျိုးနေချိန်ဆိုတော့ အောင်မြင်မှုမရ။ အန်အယ်လ်ဒီအနေနဲ့ ဘယ်လောက်ထိ လူထုကို စည်းရုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မလဲ ကြည့်ရတာပါ့။ အကောင်းဆုံးကတော့ ပွဟိတအဖွဲ့တွေ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေ ပူးပေါင်းပါဝံလာလျင် ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မည်။
လစာဖြတ်တာတော့ သိပ်သဘောမတူချဉ်..။ ပြည်ဒေါင်စုလွှတ်တော်အမတ်တယောက် ဆယ်သိန်းရ.. ၂၅%နှုတ်ဆိုလျင် ခုနှစ်သိန်းခွဲပဲကျန်မည်။ ဒီကြားထဲ အခွန်ဆောင်ရသေးလား မသိ။ သူ့မှာ သားကျွေးမှု မြှာကျွေးမှု ရှိမည်၊ မရှိလည်း အသိုင်းအဝန်း ရှိမည်။ သူ့ဝါသနာ လုပ်ခြင်တာလေးတွေလည်း ရှိအူးမည်။ သောက်စားတတ်သူအဖို့ အရင်လို ဘီအီးဆိုင်မှာ ပဲလှော်နဲ့ မြည်းလို့မရဒေါ့။ မင်္ဂလာဆောင် အကျွေးအမွေး အပေးအကမ်း ပိုများလာမည်။ ရပ်ရွာလူကြီး ဖြစ်သွားပြီလေ။ သူက မလိုခြင်ဘူးထား သူ့မိသားစုက ဝတ်ကောင်းစားလှ ဝတ်ခြင်မည်။ တော်လှန်ရေးကာလ မဟုတ်၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလမို့ ထိုက်သင့်သော အဆောင်အယောင် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိရမည်လေ။ အဲလိုမဟုတ် သီအိုရီ တစာစာအော်သူ ကူမြူနစ်များ အာဏှာရတဲ့အခါ ဘာဖြစ်ကုန်သနည်း လေ့လာကြည့်ပါလေ။ နောက်တချက်က ဒီချုပ်အစိုးရ ဖြစ်လျင် နိုင်ငံတကာ အကူအညီများစွာ ရမည်ဟု ခန့်မှန်းပါသည်၊ အဲဒီအထဲ နိုင်ငံဝန်ထမ်းများ စားဝတ်နေရေး သက်သာချောင်ချိရေး အစီအစဉ်များ သေချာပေါက် ပါလာမည်။ အကျင့်ပျက် ခြစားခြင်းကို အကောင်းဆုံး တိုက်ဖျက်နည်းမှာ သင့်တော်လုံလောက်သော လစာ၊ ခံစားခွင့်များ ပေးအပ်ခြင်းသားဖြစ်သည်။ လစာတိုးပေးရုံနဲ့မပီး ကိုယ်ပိုင်အိုးအိမ်၊ ပင်စင်ဝင်ငွေ ရှိပြီဆိုမှ နာတာရှည်ရောဂါ အကျင့်ဆိုး လျော့နည်း ပပျောက်ပါမည်။ လာဘ်ရှိရွေးကောက်ခံ အမတ်များမှာ အဲဒီ အာမခံချက်မရှိ၊ ရှိမည်ဆိုလည်း အများစု အသက်အရွယ်နဲ့ မသေချာ။ နောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အရွေးမခံရလျင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ဘယ်သူက ကျွေးထားမလဲ။ သိသလောက် လွှတ်တော်သက်တမ်းတခု အရွေးခံရရုံနဲ့ အငြိမ်းစားခံစားခွင့်မရ။ ဘုရားဟောရှိသလို သုံးပုံမှာ တပုံကိုသုံး (စားဝတ်နေရေး)၊ နောက်တပုံကိုလှူ (သာရေး၊နာရေး၊ ပုဂ္ဂလိကစည်းရုံးရေး)၊ ကျန်တပုံကိုစုဆို တလသုံးသိန်းစုနိုင်ပါမှ ငါးနှစ်သက်တမ်းတွင် ၁၈၀သိန်း ဖြစ်မည်။ ဘေးဘီလာဘ်လာဘ မယူရ၊ မတိုမလျှိုရ ဆိုလျင် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသူတယောက်အတွက် ထိုက်သင့်သော ပမာဏ ဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်စေခြင်သည်က ဆယ်သိန်းပေးလို့ ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်၊ တိုင်းပြည်အနေနဲ့ အစ ရာထောင်ချီ ပြန်ရဖို့ ကြပ်မတ်စေခြင်သည်။ ပေးတာထက် ပိုယူလျင် ဆော်သာဆော်။ နို့မို့လျင် စစ်အဆိုးဓမြ အာဏာသိမ်းခါစလို လာဘ်ယူသူ ဝန်ထမ်းအချို့ ထောင်ဒဏ် အပြစ်ပေးခံရ၊ သတင်းစာထဲပါ အရှက်တဂွဲ အကျိုးနဲဖြစ်၊ နောက်တော့လဲ ဒုံရင်းက ဒုံရင်း… ဒင်းတို့ကြမှ ဝသာလီပြည် ဘီလူးသရဲစီးသလို ဝါးမြိုစို့.. အဆုံးမတော့ ကံဆိုးသူမောင်ရှင်နဲ့ အမုန်းခံရသူ တက်ကြွတဲ့ မောင်ကြက်ဖသာ ဓါးစာခံဖြစ်ကျန်ခဲ့သည်။ နောက်ပီးဒေါ့ ထိုက်သင့်တဲ့ ငွေကြေးခံစားဂွင့်မှ မရလျင် ပြင်ပ တက်ကနိုကရက်များကို သိမ်းသွင်းမရနိုင်။ စင်ကာပူမှာတော့ အစိုးရဝန်ထမ်းကို ပုဂ္ဂလိကကော်ပိုရေးရှင်းများနျှင့်အပြိုင် ပေးသည်ဟု ကြားဖူးသည်။ ဈေးကွက်စီပွားရေး ထွန်းကားလာသည်နှင့်အမျှ အစိုးရတွင် ထူးချွန်ထက်မြက်သော မန်နေဂျာများစွာ ရှိရန်လိုသည်။ နို့မိုလျင် မတထောင်သား သူ့ထက်ငါ လူစွမ်းကောင်း ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကို မည်သို့ ထိန်းချုပ်မည်နည်း.. အမိန့်အာဏှာဖြင့် အုပ်ချုပ်၍ရမည့်ခေတ်လည်း မဟုတ်တော့…။
စည်းကမ်းပိုင်း တင်းကြပ်မည်ဆိုတာကို ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ရှုဒေါင့်က ကြည့်ခြင်တယ်။ လာဘ်ရှိ အင်အားအကြီးစုန်းသည် စစ်တပ်.. တသွေးတသံတမိန့်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ငိုးမ၊ မြေလျှိုး အဲသာ မပါဘူး.. ရေးရင်း အရှိန်လွန်သွားဒါ.. ငှိ ငှိ) စစ်တပ်။ စည်းကမ်းပိုင်း သိပ်အူးစားပေးတယ်၊ ဆန္ဒပြရင်တောင် နှစ်ယောက်တတွဲ စီတန်းလမ်းရှောက်ခိုင်းတဲ့ စစ်တပ်..။ ဒီမိုကရေစီ အခြေခံ လူ့အခွင့်ရေးတွေနဲ့ ယဉ်ပါးမှုမရှိတဲ့ (အရိုင်းအစိုင်း အယုတ်တမာ.. လှုပ်ပြန်ပီ.. အဲဒါ မပါဘူးဆို..) စစ်တပ်..။ တိုင်းပြည်ကို စည်းကမ်းတကြ ဖြစ်စေဖို့ သူတို့ကလွဲရင် အခြားမရှိ သွေးနားထင်ရောက်နေတာမို့ သူတို့နဲ့ အခြေခံတူတဲ့ စည်းကမ်းတက ရှိရေး.. တလျားအုပဒေ စိုးမိုးရေး တိတိကျကျကိုင်တွယ်ပြနိုင်လျင် ဒင်းရို့ အမြင်ပြောင်းလာလေမည်လား နွားပလာတာ ကျွေးသလို ဆိတ်ကူးယဉ်မိတယ်။ ငါတို့သာလျင် ကယ်တင်ရှင်ဆိတ်ဓါတ် မှားယွင်းကြောင်း အကောင်းစုန်း သက်သေပြမှုလည်း ဖြစ်မည်။
စွန့်စားရမှု များတယ် ဒါပေမဲ့ အမြတ်အစွန်းကလည်း ငါးနှစ်အတွင်း ရမှဖြစ်မည်မို့ လောဘသိပ်မကြီးဘဲ လူထုလိုအပ်ချက်တွေ ဖြည့်ဆည်း၊ အမှိုက်သရိုက်တွေ ရှင်းလင်း၊ အနာတရတွေ ကုစား၊ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခြေခံကောင်း တည်ဆောက်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ထားလျင် ပါတီရည်မှန်းချက် တိုင်းပြည်အနာဂတ် လူထုမျှော်လင့်ချက် စတာတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ဤနေလျှာမှ အကြံပု နှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။
မှတ်ချက်။။။ ပါစင်နယ်တခု ထင်ကြေးပေါရရင် ဒေါ်စု ကိုယ်ဟန်အနေအထား လမ်းလျောက်ပုံ ဘယ်သူနဲ့ တူသလဲ သိလား…။ ရုရှားသမ္မတပူတင် နဲ့တူတယ်.. သူလမ်းလျောက်ရင်ကြည် လာဘ်နှစ်ဖက်ကားလျားကားလျားနဲ့ ပုခုံးကို နွှဲ့လျောက်တာ။
ပူတင်ဂျီး လူထင်ကြီး
ဟုတ်မှ မလွဲရော.. အတပ်ဟောလိုက်မယ်.. ဘွားဒေါ် အာဏှာရလျင် မောင်ပူတင်လိုပဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ရံဖန်၇ံခါလဲ ခပ်ရမ်းရမ်း ကိုင်တွယ်လိမ့်မည်။ နိုင်ငံတဂါ ဆိုတာထက် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား ပိုအလေးထားလိမ့်မည်။ (အမျိုးသားရေးဝါဒီများ ဝမ်းမြောက်ကြပါကုန်) အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံတွေက ဒီမိုအခွင့်ရေး လှုပ်ရှားသူများအဖို့တော့ သတင်းဆိုးပဲ။ ပါတီတွင်း ပုန်ကန်ထကြွမှု ဖြစ်လာဖွယ်ရှိသည် သို့သော်ဘွားဒေါ် ဘုန်းကံကို အံတုနိုင်ဖွယ်မရှိ။ ဟောလာဘ်စနဲ့ ဆက်ဟောလျင် အောင်မြင်မှုများ ရနိုင်သလို အငြင်းပွားဖွယ် ပြသနာများလဲ ဖြစ်ပေါ်လာဖွယ် ရှိသည်။ မည်သို့ပင် ဆိုစေ မတ်နီမတ်နီ မက်တားမို့စ်… မတ်နီစက်ကင်းဂေါ့ဒ် ငွေသာ အရေးကြီး ငွေရှိလျင် အလျှာလျှာ အောင်မြည် ဖြစ်ပါဂျောင်း…..
ပုဏ် – နိုင်ငံရေးပိတ်ဟော ဒီမိုကြောင်ကဝိ (ရဲရဲတောက်)
ခင်ဗျားတိုရွာက ကျောင်ကျီးဆိုတာက ဗေဒဝိဇ္ဇာ တစ်ပါးပါ တကား
ယနေ့မှစရွေ့ သတိစွဲ လမ်းလျှောက်ကြပါကုန်
ခင်ဗျားတို့ရွာက ကိုရင့်ရွာလည်းဖြစ်ပါသည်…. တမုံ့..။
​နောက်​ထပ်​ သံ​ချောင်းတစ်​​ယောက်​ပါလား ?
သံချောင်းတွေ ဝင်မရောင်းကြစေလိုပါ ခင်ဗျား
ညှင်းညှင်း သုဘရာဇာဆိုတာ အရိုးမြင်​ရရင်​​တောင်​
ဘွားတော်ခြေလှမ်းကို သူ့လူတွေ မမီမှာပဲ စိုးရိမ်၏…
ကျောက်စိမ်း တိန်ညင် says:
အူး သန်းရွှေ သမ္မတလုပ်မယ်ကြားတယ် ….
သူ့အကြံပေးကို ဝီစကီတလုံးတိုက်ပီး ဒီသတင်းယူလာတာ ….. ။
ဟိုနေ့က အမေ…ပြောလိုက်တဲ့ ခပ်တင်းတင်းခပ်မာမာ စကားတွေကြောင့်
ပူညံပူညံ ဖြစ်သွားကြတာကို ကြည့်ပြီး…
ပေးထားတဲ့… အကျန်…အဲ… အဲ.. အကြံတွေ…။
မြန်မာမှန်လျှင်.. ဘယ်သူ့ကို.. ဘယ်သူကမှ..လက်အုပ်မချီ.. ဖြစ်စေချင်..
မေမေ့ကို မကောင်းပြောရင် နာ့ လေသေနတ်နဲ့ ပစ်မယ်။
-မောင်သူရ ဆိုသူ(ဇာဂနာ ဆိုလား)အားးးးး
အနော် မောင်သူရမှ ဆက် လက် စကားပြောဆို ဆွေးနွေးသင့်/မသင့်
.လုံးလိုက် ပြားလိုက် ချောင်းလိုက်နဲ့ မျက်စေ့နောက်လှသကွာ..ဘီအီးပုလင်းသာပြန်ယူချီပါ :))
အဲဒီလမ်းလျှောက်ပုံက.. ဒေါ်စုနဲ့ပူတင်တော်တော်တူနေတာ… စသတိပြုမိသူက.. ကကြောင်ကြီးဆိုရင်တော့ တော်တော်အံ့သြချီးကျူးမိမှာပဲ..
ပြောချဉ်နေတာ ကြာပီ အူးမာမွတ်…. ဒေါ်စု နိုင်ငံခြားထွက်တော့ လမ်းလျောက်တာ ပိုမြင်ရတယ်။ ကိုယ်ကို နွှဲ့ပီးလျောက်တာ သိသာတယ် အကျင့်ဖြစ်နေတယ် ထင်လျဲ့
ဒီတစ်ပတ်ထုတ် ဒီလှိုင်းမှာ မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံကို ဖတ်ရချိန်.. အသက်တောင် ပြင်းပြင်းမရှူနိုင်ခဲ့ဘူး…
ဒီလိုခေါင်းဆောင်မျိုးနဲ့ ကြုံရတာ ကံကောင်းလိုက်တာလို့ တွေးမိတာ. လွန်မလားငင်..
ဘာပဲ​ပြော​ပြော ပြည်​သူ​တွေက ​ဒေါ်စုအုပ်​ချုပ်​တာခံရဖို့ ​တောင့်​တ​နေတာ ကာလအ​တော်​ကြာပြီမို့လားမသ်ိ။ ​ဒေါ်စုက တစ်​ခုခုလုပ်​ပြရင်​ ​နောက်​က သ​သွေမတိမ်းလိုက်​လုပ်​ကြမယ့်​သ​ဘောမှာရှိတယ်​။စည်းကမ်းမဲ့တာ​တွေ ခဏ​လေးနဲ့​လျော့ကျသွားမှာ မလွဲ​သေချာ။